Nepalistudio » काँकडभिट्टातर्फ जादै गरेको बस महुली पुलमा दुर्घटना, १३ जना घाइते काँकडभिट्टातर्फ जादै गरेको बस महुली पुलमा दुर्घटना, १३ जना घाइते – Nepalistudio
काँकडभिट्टातर्फ जादै गरेको बस महुली पुलमा दुर्घटना, १३ जना घाइते
सप्तरीमा काठमाडौंबाट काँकडभिट्टातर्फ जाँदै गरेको ना. ६ ख ३१८९ नम्बरको यात्रुबाहक बस आज आइतबार बिहान दुर्घटना भएको छ । सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका ५ बकधुवास्थित महुली पुलमा आइतबार बिहान भएको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित १३ जना घाइते भएका छन्।
सप्तरीको पूर्व पश्चिम सडकको जिल्ला पूर्व पश्चिम सडकको बकधुवास्थित महुली पुलमा काठमाडौंबाट काँकडभिट्टातर्फ जाँदै गरेको ना. ६ ख ३१८९ नम्बरको फिफा डिलक्स बस बिहान करिब पौने ६ बजेतिर पुलबाट नौ फिट तल खसेर दुर्घटना भएको हो। बसमा चालकसहित २४ जना रहेका यात्रुु रहेकोे थियो ।
दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी झापाका नौ जना, पाँचथरका दुई, सुनसरीका एक र सिन्धुलीका बस चालकसहित १३ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
यता घाइतेहरुको महुलीस्थित सिटीकेयर अस्पताल र धर्मेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस बिषयमा प्रहरी घट्नास्थलमा पुगि अनुसन्धान कार्य भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
तस्बिर सौजन्य : सप्तरी युथ ।
१९ फाल्गुन २०७५, आईतवार प्रकाशित